Home News Qeeybo ka mid ah gobolka Mudug oo la duqeeyay iyo wararkii ugu...
Qeeybo ka mid ah gobolka Mudug oo la duqeeyay iyo wararkii ugu dambeeyay
Wararka ka imaanaya deegaanka Maamiye oo u dhaxeeya Camaara iyo Caad ee degmada Xarardheere gobolka Mudug ayaa sheegaya in diyaarad dagaal ay halkaasi duqeyn ka wado.
Wararka ayaa intaas ku daraaya in duqeynta ay diyaarada deegaankaasi ka bilaawday orax dhacii galabta ayna Shan Gantaal ku riday saldhig dagaalyahanada Shabaab ay deegaankaasi ku leeyihiin.
Waxaa duqeynmahaani ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jiro walloow weli aan la xaqiijin tirada rasmiga ah ee ku waxyeeloowday, maadama ay weli deegaankaasi duqeynta ka socoto.
Dhawaanahaan waxaa soo kordhaayay duqeymaha diyaaradaha ay ka geystaan deegaanada ay gacanta ku haayaan Shabaab iyadoo dhawaan dowladda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay in duqeyn lagu burburiyay Idaacad afka shabaab ku hadli jirtey.
Previous articleGudoomiyaha Gobolka Banaadir oo maanta daah furay mashaariic lagu horumarinayo Caasimada Dalka
Next articleDilal kala duwan oo caawa ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Taliyaha Ciidamada Uganda oo xilka kala wareegay taliyahii hore